Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh india | Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa India
200 Hora Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzira Kosi
500 Awa Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa India (Yepamberi)
100 Hora Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzira Kosi
60 Awa Chakra Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzira Kosi
Hupenyu Shanduko yekufungisisa Kudzokorora
Kutamba kweMweya Kufungisisa Kudzoka
200 Hour Hatha Yoga Mudzidzisi Yekudzidzisa Kosi
200 Hour holistic Yoga Mudzidzisi Yekudzidza
200 Hafu Shanduko Yoga Mudzidzisi Yekudzidzisa
200 awa Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh
100 Hour holistic Yoga Mudzidzisi Yekudzidza
Shanduko 100 awa Yoga Mudzidzisi Dzidzo
300 Hora Yoga Mudzidzisi Yekudzidzisa Kosi
Holistic Yoga Kudzorera
Kisimusi Yoga Uye Kufungisisa Kudzokorora
Yoga Nidra Mudzidzisi Wokudzidzisa Rishikesh India
150 Hafu Yepamberi Yoga Nidra Kudzidziswa Kwevadzidzisi
Kufungisisa Mudzidzisi Wedzidzo
Yoga Mudzidzisi Dzidziso Ongororo
Yoga Nidra Ongororo
About Yoga Essence Chikwata
Shandura Muviri Wako-Kufema-Pfungwa-Mwoyo
Uya neChinangwa, Chinangwa uye Runyararo Muhupenyu Hwako
Iva Nechokwadi Essence yeYoga, Kufungisisa uye Yoga Nidra
Kugamuchirwa kuYoga Essence Rishikesh padhuze reHimalayas kuti unzwe chokwadi chechokwadi cheYoga, Kufungisisa, Yoga Nidra uye Hupenyu Shanduko kuburikidza neInternational Certified mudzidzisi makosi akadai sa:
100 Awa Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa India
200 Maawa Ekufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India
200 Hour Yoga Nidra Mudzidzisi weIndia India (Level-1,2,3)
200 Hour Hatha Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India
200 Hour Holistic Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India
200 Hafu Shanduko Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa India
300 Hour Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India (Yepamberi)
Inowanikwa & Hupenyu-Shanduko Makosi
Iva Nerufaro rweKurarama Kwemahara
Kufungisisa Mudzidzisi Widzo Yekuita Rishikesh India
Ziva maitiro ekuyera Muviri-Pfungwa-Mwoyo, Sei kuongorora zvakavanzika zviyero zvehupenyu, Dzidza hunyanzvi hwekudzidzisa Kufungisisa nekubatanidza yedu yekufungisisa kudzidzisa kosi kosi.
Yoga Mudzidzisi Yekudzidza Rishikesh India
Sangana Chaizvoizvo Essence yeYoga uye Hupenyu Shanduko, Sangana Nerufaro rweHupenyu hwekudzidza, Dzidza hunyanzvi hwekudzidzisa Yoga nekujoinha Yoga Mudzidzisi Widzo Yekuita.
Yoga Nidra Mudzidzisi Widzo Yekuita Rishikesh India
Sangana wakadzika Kuporesa uye Relaxation, Dzidza nhanho nhanho nzira kudzidzisa iyo yoga nidra, Ziva maitiro ekuyera Muviri-Pfungwa-Mwoyo nekujoinha Yoga Nidra Mudzidzisi Widzo Yekudzidzisa.
Rega Yoga yedu uye Kufungisisa
Kosi Yekudzidzira Shandura Hupenyu Hwako
Yoga Essence Rishikesh isangano risingabatsiri uye rakanyoreswa yoga chikoro cheYoga Alliance (RYS), uye Yoga Alliance Kuenderera Mberi Yekudzidzisa Mupi (YACEP). Isu takatsaurirwa pakuparadzira ruzivo uye sainzi yeyoga, kufungisisa mune kwayo yakachena chimiro apo tichinunura mufaro, rugare, kuwirirana, uye kuenzana. Isu tinopa zvese zvakazara, zvinowanikwa, uye shanduko yezvakanakisa zvakasiyana siyana zveoicic maitiro kuburikidza nemhando dzakasiyana dzedzidzo yekudzidzisa
Kuchengeta mupfungwa yedu yepamoyo kukosha kwekutungamira zviitiko zvechokwadi kune chero anotibatana, isu tinopa dzakawanda dzakasarudzika zvidzidzo kuti zvibatsire mumwe nemumwe zvinodiwa;
Maawa zana Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa
500 maawa Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa (Advanced)
Maawa mazana maviri Yoga Nidra Mudzidzisi Wedzidzo (Level I, II, III).
Maawa mazana maviri Hatha Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa
Maawa 200 Holistic Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa
200 maawa Shanduko Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa.
Zvidzidzo zvedu zvekudzidzira zvinosanganisa zvakanyatsojeka uye maitiro evazhinji vatenzi vekare uye vanhasi vanogadzirisa pfungwa, mararamiro, nyaya dzehupenyu hwevanhu vemazuva ano uku vachikurudzira vadzidzi kuvaka hwaro hwakasimba hwerunyararo rwemukati, kugamuchira, kuzviona.
Dzidziso dzangu dziri kuunzwa nenzira yakasununguka uye inofadza kuitira kuti iyo yose kudzidza nekushandura maitiro inyatsodzika painenge ichigadzira hwaro uye hwakagwinya kuti uwane ruzivo runoshanda rwese manhengo masere e yoga, sekutanga sezvakatsanangurwa naRishi Patanjali. Maitiro edu ese anodzidziswa nekubatanidza zvese zvakakosha nheyo yesayenzi yekare science uye yemazuva ano kurapa sainzi kuti iite yakazara, inorongeka, uye inoenderana nehupenyu hwedu hwazvino.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvenyaya yedu yekutanga nezvekuita iyo yoga, ndapota tarisa kumablogi edu pamusoro pezvatinotenda kuti ndizvo yakachena iyo yoga.
Isimba rese reYoga Essence, Rishikesh yakazvipira mukupa ruzivo rwemhando dzose muzvikamu zvese kuti zvipe iyo yoga senzira yehupenyu. Dzidziso dzedu, pekugara, chikafu, yoga uye yekufungisisa horo pamwe neiyo yakakodzera yogic ambience inovandudzwa kuti izadzise chirevo chayo chakakosha chekupa vadzidzi ruzivo rwezviitiko zveiyo yogic maitiro uye ehupenyu hweshanduko.
Isu tiri ashram pamwoyo uye tinotenda mukupa yakarangwa ashram kunge nharaunda inobvumira vadzidzi kuti vaongorore zvakadzama mukati memuviri wavo, pfungwa, uye mweya. Yedu yekugamuchira semhuri-senge timu inogara yakagadzirira kubatsira nekutsigira kwako-kutenderera kukura uye kuita kuti unzwe kumba panguva yekugara kwako.
Yoga Essence Rishikesh inopa yakachena uye yakachena uye yakanaka pekugara pekugara kwako panguva yekudzidzira kosi. Chikoro chedu chiri munzvimbo ine runyararo, yakanyarara nzvimbo yeLakshman Jhula, iyo ingangoita mazana maviri emamita kubva kurwizi Ganga. Iyo yakakomberedzwa nemakomo eHimalayan akanyarara uye anonamira greenery kumativi ose. Aya makomo anoyevedza kutarisa uye kuyerera kwekuzorodza mhepo inotonhorera ichiuya kubva kudivi reGanges kunobatsira vatori vechikamu kuzorora kwechisikirwo uye kwekufungisisa kuziva.
Makamuri edu ese ane zvigadzirwa zvemazuvano seyakavharirwa imba yekugezera, inopisa uye inotonhorera, nzvimbo inofefeterwa-mhepo, kamuri Wi-Fi, mvura yakanatswa yekunwa, nezvimwewo.
Samyak Aahaar- kudya kwakaringana uye kwakaringana chikamu chemabasa eiyo yogic. Nekudaro, isu tinosarudza akasiyana siyana anonaka, ane hutano, achangobva kubikwa chikafu kuti asimudzire iyo yogic zvakaitika. Zvizhinji zvezvinhu zvekudya zvinhu zvakakurumbira zvechinyakare zvinobva kunzvimbo dzakasiyana dzeIndia. Idzo chikafu chinogadzirwa nenzira yakapfava yekudyara nerudo rukuru nevane ruzivo vanobika kubva kunharaunda dzeHimalayan.
Zvese zvinongedzo, senge miriwo, michero nezvimwe zvinhu, zvinotengwa zvichangoitika nguva nenguva uye kwenzvimbo ino kwehutano hwakanaka. Kudya kwedu kunobatanidza yakasarudzika yeiyo sattvic kukosha kweiyo yogic tsika, hutano uye hwekuporesa kukosha kweAyurveda & yechikafu chikafu, uye kukosha kwehutano hwekudya kwemazuva ano.
Mashoko anobva mumwoyo yevadzidzi vedu
Dzamisa Pfungwa dzako, Muviri &omweya
Ongororo yevhidhiyo ye Yoga TTC & Yoga Nidra TTC
Ongororo yevhidhiyo ye Kufungisisa TTC
Sei Dzidza Yoga kana Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa muIndia
Balance Pfungwa dzako, Muviri &omweya
INDIA iri kudedera neYogic simba minda. Kweanenge zviuru gumi zvemakore, vanotsvaga vasvikira pakupedzisira kuputika kwekuziva pano. Nomuzvarirwo, zvakagadzira simba remunda wakakomberedza nyika. Vibration yavo ichiri mupenyu, simba ravo riri mumhepo chaimo; iwe unongoda humwe hwekuona, humwe hunhu kuti ugamuchire zvisingaonekwi zvinotenderedza nyika inoshamisa iyi. Paunenge uchiita Holistic Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa uye Kufungisisa Mudzidzisi weChipo pano, uri kubvumira iyo chaiyo India, iyo nyika yemukati rwendo kuti isvike inosangana zvakananga newe. Izvo zviri pamusoro penzvimbo, imwe inongoda kutarisirwa! Kuziva! Ziviso!
RISHIKESH Kupinda mune yakadzika Himalaya - iyo suwo kune avo vari kutsvaga kupinda mukati merwendo rwavo rwemukati. Inozivikanwa se "Tapo-Bhumi" zvichireva nzvimbo yekudzidzira ye yoga uye kufungisisa kwemazhinji masosi nevatsvene kubva panguva dzekare. Zviuru nezviuru zvevachengeti uye nevatsvene vakashanyira Rishikesh kuti vafungisise mukutsvaga kwakakwirira ruzivo uye Kuzviona. Iyo yogic simba minda uye nemweya simba renyika rinoita rwendo rwedu rwemukati rive nyore. Dzidza zvakawanda nezve rwendo rwedu rwemukati uye shanduko yedzidzo dzakadai seyedu 200 awa Yoga Mudzidzisi Wedzidzo uye mazana makumi maviri Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa zvirongwa.
IZVI ZVINONYANYA KUKOSHA
PaYoga Essence Rishikesh, tinoisa kukosha kwakakosha pane inowanikwa uye yehupenyu shanduko hunhu hweiyo yoga, yoga nidra uye kufungisisa. Panzvimbo pekungotarisa pazvinhu zvinodzidzisa uye zvehunyanzvi maitiro atinodzidzisa, isu tinovavarira kubatsira vadzidzi kuti vagadzire ruzivo nyowani hwehupenyu hune rugare, hwekufara uye hune hukama kuti vakwanise kupfuudza izvi zvirevo kune vamwe.
Chikoro chedu ndeavo vanoda vegaga kubva pasirese nyika vakadana zvirongwa zvedu kuti "chokwadi chekunamata uye nehupenyu shanduko". Izvi zvinodaro nekuti isu tinotora hanya yakakura kuti tipe nzvimbo yakachengeteka, yakagadzikana, uye yekugamuchira vadzidzi kuti vashande zvakadzama mukati mezvikamu zveMuviri-Breath-Pfungwa-Mwoyo yekuwedzera kweConcciousness.
Yedu yoga chikoro ine hunyanzvi hukuru hwepamusoro yogic maitiro senge yogi nidra, kufungisisa, chakra, kundalini uye yakavanzika miviri. Kunze kwekubva kune edu yoga ekudzidzisa kudzidzisa zvirongwa, isu tinopa yoga nidra mudzidzisi wekudzidzira kosi, yoga nidra mudzidzisi wekudzidzira makosi (level 1, nhanho 2, nhanho 3), kufungisisa mudzidzisi kudzidzisa makosi (100, 200, maawa mazana mashanu), nezvimwe.
Yedu 200 Hour Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa uye mazana maviri maawa Kufungisisa Mudzidzisi Kosi yekudzidzisa inobata yakakosha kukosha kune dzimwe yoga vadzidzisi kudzidzisa makosi nekuti isu tinopa yekuwedzera makumi mashanu maawa Yoga Nidra kudzidzisa kwemudzidzisi (aine chitupa) inobvumira vadzidzi vedu kubatsira vanhu vane yakakwirira yogic maitiro.
Hupenyu hushanduko uye hunhu makosi ane nzira yesainzi yekudzidzisa.
Chikoro chete muIndia chinopa Yoga Nidra Mudzidzisi Widzo Yekudzidzisa
Matekiniki nemaitiro anofukidza tsika dzakasiyana dze yogic nenzira
Yoga Essence Chikwata
Dzamisa pfungwa, Muviri &omweya
Tungamira Kufungisisa uye Yoga Nidra Mudzidzisi
KUKOSHESA UYE YADZIDZA YAKawanda DIFFERENT MEDITATION PRACTICES
Semudzidzisi weYoga, ndakasarudza kutevera iwo maawa mazana maviri ekufungisisa kudzidzisa kwemudzidzisi muYoga Essence Rishikesh nekuti ini ndaida kudzidza uye kuona maitiro akasiyana ekufungisisa ayo kudzidziswa anopa hunyanzvi maitiro akasiyana kune zvimwe zvikoro. Kwete chete ini ndakasangana uye ndakadzidza maitiro akasiyana siyana ekufungisisa asi zvakare yakave iyo hupenyu hwangu hunochinja maitiro. Ndakawana mufaro uye kugadzikana mukati mangu; yakadzamisa rwendo rwangu rwemukati kuti ndizive kuti ndiri ani chaizvo? Boka diki rechirongwa rakatibvumira kushamwaridzana nevatinodzidza navo uye zvakaita kuti vadzidzisi vakanaka kwazvo vape nhungamiro yega. Vadzidzisi vari kurarama izvo zvavanodzidzisa uye ikozvino ini ndinonzwisisa zvakanyanya zvazvinoreva kuva iyo yogi. Zvino ndoziva nzira yandinoda kudzidzisa yoga munyika yangu yemba nemufaro wakawanda, kuimba nekutamba. Ini ndinonyatsokurudzira iyi kosi uye chikoro. Ndinoonga kuti ndakaitevera. Namaste! Mario.
NDAKADZIDZA, NDINOSHANDURA UYE KUDZIDZA KUTI NDODA
Zvandakasangana nazvo @ Yoga Essence Rishikesh nekubatanidza mazana maviri ehora Yoga Mudzidzisi wekudzidzira kosi haigoni kutsanangurwa mumashoko. Chaive chiitiko chemashiripiti nezve hupenyu, pfungwa, muviri uye mweya. Nezve kuti ungapinda zvakadzika sei mukati uye kuti unopinda zvakadzika sei mukufungisisa, uye nekurega kuenda. Iwe unofanirwa kuzvinzwa, kuzviratidza, kuratidza, kutamba, kuseka, kupopota, kusvetuka, kuti unzwisise izvo Swami Samarth iri kuyedza kuunza nekosi yake. Ndine rombo rakanaka kuti ndanga ndiri mumwe wevadzidzi vake nekuti kana uchida kuva mudzidzisi we yoga, unofanirwa kuzvibatsira pachako, kuitira kuti ubatsire vamwe. Ungaite sei kudzikamisa vamwe, kana iwe usingazvigadzikise pachako? Ndakazviwana, ndakazvishandura uye ndakadzidza kunyatsozvida ini nevamwe pasina mhosva. Per yakazara Ini ndinotenda nezvandinogamuchira kuYoga Essence. Ndinoziva uku kwaingova kutanga kwangu kune rwendo rweYoga, asi chekutanga ichi chaive nezveMI, uye chakave nechiratidzo chakakura chekuziva zviri mukati mangu uye kuti ndingapinde sei mu yoga uye nekufungisisa. Ndatenda Namaste!
KUTENDA, KUZVIDZIVISA ZVOKUDYA
Yoga Capital yeIndia, Rishikesh ndaigona kuwana musimboti weiyo yoga nekunyoresa muna 200 awa Yoga Mudzidzisi Kosi Yekudzidzisa paYoga Essence, Rishikesh pasi pekutungamirirwa nerudo kweSwami Samarth. Chikwata chinogara chine hushamwari uye chinotsigira cheJoy, Anoop, Dhiraj, Ranjan, Prasad aigona kuita mazana maviri ega yoga kudzidziswa kwemudzidzisi kuyerera zvakaringana sekuyerera kweGangwa redu rinoshamisa raMwari. Ndinonzwa ndakakomborerwa sezvo iyo nzira pachayo yakanga iri kupfuura zvandaitarisira. Kumashure kwehurongwa hwakanyatsosungwa musina vhiki kubva kunze kwaive chinangwa chekuchengetedza simba reboka kuti riwane kushandura frequency pane imwe nhanho uye ini ndainzwa kuti ndiyo mhemberero yechikoro. Pakupera kwekupedza iyo kosi pamwe neSitifiketi, tinogona kuve neiyo 'transcend experience' yekukura kwemukati kuburikidza neakasiyana siyana maitiro ekufungisisa sechokwadi kutora chipo. Mune maonero angu "Mushure mekutangisa-ruoko rwekutanga chete, mutori chikamu anogona kuve Akanaka Mudzidzisi" ndiyo hwaro hweHolistic Yoga Mudzidzisi Yekudzidzisa paYoga Essence Rishikesh. Wangu munamato wemwoyo wose weiyo Holistic Hutano Kukura avo vari kujoina iyo kosi uye yechikoro. Ndine chikwereti chechokwadi kune timu yese nekuda kwerudo rwavo nerutsigiro panguva yangu yese yekugara. Pranam, Rudo
Shanduko, KUSVIKIRA UYE KUDZIVISA KUTI Uwane Ruzivo
Izvo zvirevo zvandakawana ndichigara uye kudzidza kuYoga Essence hupenyu huri kuchinja. Mushure mekutsvaga kutenderera nyika kune chikoro chaicho / Ashram / academy yekuvandudza rwangu rwendo rwemukati ndinofara kwazvo kuti ndakawana Yoga Essence. Nzvimbo yechikoro inoshamisa, yakachena kwazvo, uye izere nesimba rakanaka. Chikamu chakanakisa timu uye manejimendi echikoro, anogara akagadzirira kubatsira. Matekiniki akadzidziswa paYoga Essence akasiyana-siyana uye akanyanya kuchinja. Swami Samarth Ndinofanira kutaura kuti iwe uri mudzidzisi anoshamisa uye chikamu chakanakisa ndicho chaunodzidzisa, iwe unorarama. Chiitiko chako uye kuoneswa kuri kuvhenekera uye ndinotenda nemoyo wese kuti Yoga Essence ichaita basa rinoshamisa mune ramangwana rinouya. Ndinofanira kuwedzera kuti yako timu inosanganisira Joy, Prasad, naRanjan zvinoshamisa uye vese vakomana ava vazere nerudo, rugare uye kuwirirana. Iyo maawa mazana maviri Ekufungisisa mudzidzisi yekudzidzira kosi inozadzisa zvese zvandinotarisira izvo zvandaitsvaga. Zviri mukati mekosi yacho zvinobata dzakasiyana siyana dzenzira dzekufungisisa dzinozorodza uye dzinozadzisa zvinotarisirwa nemunhu anotsvaga.
Zvakanga ZVAKANYANYA KUTI DZIDZE STEPI STEP MeTHODOLOGY
Yoga Nidra Mudzidzisi Kudzidzisa kwaive kwakanyanya kundinetsa mukutanga nekuda kwekuwanda kwangu kwekunetseka uye kusagadzikana kuti ndiwedzere kudzikama ndikuregedza. Asi sekufamba kwemazuva, ini ndakanzwisisa izvo zvinokonzeresa nyaya dzangu ndokufambisa mune zviitwa, ndakakwanisa kuvasunungura nekuda kweYoga Nidra zvikamu uye kuratidza maitiro anofungisisa ekufungisisa. Chaive chinonakidza chiitiko kunzwisisa, kudzidza uye kunzwa nhanho nhanho nzira dzeYoga Nidra maitiro seyakajairwa tsika yeYogic sainzi uye yemazuva ano sainzi yekurapa yekutarisa kubva kuSwami Samarth. Icho chaive chiri chiyero chakanaka pakati pekusaita uye kuita kwemaitiro eiyo yoga nekufungisisa. Dzidziso idzi dzaibatsira kwazvo uye dzakabatsira kuenda pakadzika mukudzidzira panguva imwechete ichidzidzira hunyanzvi hwekuvadzidzisa. Rota remutsa uye nyoro pakudzidzisa nevose kufungisisa & yoga vadzidzisi izvo zvakafarirwa kwazvo. Chikafu uye vashandi vacho zvaive zvakanaka uye zvine hushamwari. Chikafu chinonaka kwazvo uye chinonaka.
Verenga Zvimwe Zvipupuriro
Kunzwisisa Muviri, Pfungwa, Moyo & neMweya
YOGIC KUKOSHESA KWASILENCE MEDITATION
Dai 3, 2020Dai 5, 2020yogaessencerishikesh
February 11, 2020Dai 5, 2020swamidhyansamarth
SYLLABUS YEMAHARA 200 YOGA MUDZIDZISI WOKUDZIDZA KURE
Dai 28, 2019Dai 28, 2019swamidhyansamarth
ZVISANGANO PAMUSORO POKUFUNGISIRA
Dai 18, 2019February 11, 2020swamidhyansamarth
VIGYAN BHAIRAV TANTRA: Iyo The Encyclopedia of Kufungisisa Matekiniki
Chii chinonzi Raja Yoga? Kuenzanisa kwaRaja Yoga naHatha Yoga
April 15, 2019Dai 5, 2020swamidhyansamarth
Lower Tapovan (Behind Dewa Dzokera),
Email us: [Email akadzivirira]
Call isu: (+ 91) 7409349919 / (+ 91) 8954559984
Ongororo Yevadzidzi Yoga Essence
Dzidzo Yekudzidzisa Vadzidzisi
200 Maawa Hatha Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh
Maawa 200 Holistic Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh
200 maawa Shanduko Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa
300 maawa Yoga Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India
050 Maawa Yoga Nidra Mudzidzisi Kudzidzisa India (Level- I)
Maawa 150 Yoga Nidra Mudzidzisi Wokudzidzisa India (Level- II & III)
Maawa mazana maviri Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa Rishikesh India
500 maawa Kufungisisa Mudzidzisi Kudzidzisa India (Yepamberi)
Maawa zana Holistic Yoga Mudzidzisi Kudzidzira Kosi
Shanduko Yekufungisisa Kudzokorora
Mazuva Mazuva Holistic Yoga Kudzorera
Kutamba kweMweya Kudzoka
YOGIC KUKOSHESA KWASILENCE MEDITATIONDai 3, 2020
SYLLABUS YEMAHARA 200 YOGA MUDZIDZISI WOKUDZIDZA KUREDai 28, 2019
ZVISANGANO PAMUSORO POKUFUNGISIRADai 18, 2019
Chii chinonzi Yoga? - Philosophy kana DisciplineJuly 10, 2018
CHAKRA Kufungisisa: Kufungisisa Miitiro pa Psycho-Yemweya Simba CentersApril 14, 2019
Ujjayi Pranayama: Iyo Inokunda Kudzidzisa BhindaukoApril 7, 2019
Shanduko Yoga: Iyo Tenzi Kiyi YeshandukoNovember 16, 2018
BATSIRO DZEPRANAYAMADecember 25, 2018
Yoga Essence Rishikesh © 2019 | Kodzero Dzese dzakachengetedzwa